Jụọ Ọkachamara Semalt: Ọ Dị Mma Iji Google Posts Maka Google Business M?
Na Google My Business maka obere azụmahịa, ị nwere ike ugbu a na-arụsi ọrụ ike mpaghara search engine ọrụ kachasị mma.
Michael Brown, Onye Ọrụ Ndị Nlekọta Ọrụ nke Ọkachamara , na-ekwenye na ngwa na-enye ndị SME aka ịmepụta akaụntụ n'efu site na nke ha nwere ike ijikwa otú azụmahịa ha si apụta n'Ịntanet.
Olee otú Google Posts Ọrụ
Iji kwalite ọrụ na Google My Business bụ nnọọ mfe. Mgbe ịbanye n'ime ọdụm Business m, kwagharịa na mpaghara "posts" nke kwesịrị ịdị n'akụkụ aka ekpe nke ihuenyo ahụ. Site na e nwere nhọrọ ịmepụta ọhụụ ọhụrụ. Ahịa nwere ike iji ihe ndị a:
Kpọsaa ọkachamara kwa ụbọchị ma ọ bụ nkwalite ọhụrụ
Na-akwado ọhụụ ọhụụ ọ bụla ma ọ bụ ọhụụ
Mepee ngwaahịa kachasị mma ma ọ bụ ndenye ọhụrụ
Jiri Google Posts ma ọ bụ ọ bụghị?
Uru nke iji Google posts ka na-esi ike ikpebi ka ọ ka dị ọhụrụ - visualization mongo data. Ọ gaghị ekwe omume ịgbakọ nhụwa saịtị, Google ejighịkwa nyochaa njedebe nke posts. Ka o sina dị, ọ dị mfe ma nweere onwe ịmepụta post nke gosipụtara na ọ nwere nnukwu ihe..
Ụzọ kachasị mma nke Google
Dịka ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ gbasara Google, enwere ụfọdụ omume kachasị mma nke mmadụ ga-agbaso mgbe ị na-eke ma na-elekọta ọrụ ha.
Zere igbochi nkwalite na ahịa dika asụsụ
Google na-egbochi iji asụsụ gimmicky dịka onye na-enye ego dika "BOGO 50% anya !!!" dị ka ha na-ewere ya dị ka mgbasa ozi spammy. Ọ bụrụ na search algorithms na-a whiff nke ndị dị otú ahụ posts, ha wepụ ya ma ikpe onye nwe. Onye kwesiri iji ohere nke irere ndi ahia ihe omuma nke na eme ka ha mara ihe ahia nke di na ugbua.
Kọwaa na ọkwa ọ bụla site na ịnye ọtụtụ ozi dịka o kwere mee
Ebe ọ bụ na Google na-enye ọtụtụ oghere efu iji jupụta ozi, ọ bụ n'aka onye nwe ụlọ ahịa iji hụ na ha jupụta ozi dị ka ha nwere ike. Ihe odide na-ekiri anya na ihe oyiyi elebara anya ga-enyere ijide uche nke onye ọrụ ma mee ka ha gaa na saịtị ahụ. Mgbe ụfọdụ, ndị ahịa na-achọta ihe zuru ezu banyere ọdịnaya ahụ bara uru. Na mgbakwunye na nke a, ka o nwekwuo ihe ọmụma ahụ, ọganihu nke ohere ndị na-erigbu algorithms ga - ewepụta isiokwu dị mkpa.
Oge na oge
Ozi site na ikpo okwu kwesịrị ịkọwa ihe gbasara oge. Mgbe ha kwụsịrị ịghọ ihe dị mkpa, enwere nhọrọ iji wepụ ha kpamkpam, ma ọ bụ mee ka ha gbanwee iji mezuo nzube ọzọ. Inwe onwe gị na posts na-eme ka e jide n'aka na e nwere ụfọdụ ndị na-ege ntị na-eleta.
Echefula atụmatụ atụmatụ SEO dị
Nchịkọta ogo bụ usoro na - aga n'ihu, ya mere, ọ ghaghị ịbụ mgbalị a na - etinye na ịnọgide na - enwe ọrụ ọrụ njikwa search engine. Ọ pụtara ịnweta njikọ ndị ọzọ, na-emepụta ihe dị iche iche nye ndị na-azụ ahịa obodo, ma na-anakọta nyocha dị mma.
Enweghị nkọwa maka uru ọ ga - esi baa uru nye obere ụlọ ahịa ma ọ nwere ike inyere aka n'ịkwalite ihe omume, onyinye, na akụkọ maka ụdị ha.